Mareykanka oo maanta safaarad ka furanaya magaalada Qudus - BBC News Somali
Mareykanka oo maanta safaarad ka furanaya magaalada Qudus
Image caption Haween reer Falstiin ah oo ag marayo nin ku labisan calanka Mareykanka agagaarka Magaalada Qudus.
Mareykanka ayaa safaarad cusub ka furanaya magaalada Qudus, waa tallaabo ay so dhawaysay Israa'iil balse Falastiiniyiinta waxay samaynayaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan in safaaradda halkaasi lagu furo.
Dadka Falastiiniyiintu waxay doonayan in bariga magaalada Qudus ay tahay caasimaddooda mustaqbalka ayna u arkaan go'aanka Mareykanka inuu yahay mid garab lagu siinayo Israa'iil.
Israa'iil waxayna ku tilmaantay Qudus inay tahay caasimaddeeda oo aanan kala go'i Karin.
Go'aanka madaxweyne Trump ee sannadkii tagey uu ugu aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil wuxuu shaki geliyay dhexdhexaadnimada Mareykanka ee qadiyadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil.
Image caption Ivanka Trump oo salaamaysa safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil.
Munaasabadda furitaanka saafaradda Mareykanka ee Qudus ayaa kusoo beegantay xilli ay Israa'iil ay xusayso sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay xornimadeeda.
Image caption Waa dhismaha Mareykanka ee ku yaallo Qudus halkaasoo si rasmi ah maanta loo daah furayo safaaradda.
Safaaradda Mareykanka oo loo soo wareejinayo Qudus 2019
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka dunida inay kusoo biiraan xafaladda furitaanka safaaradda Mareykanka ee Qudus.
Hoggaamiyaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa ku tilmaamay go'aanka Trump 'darbaaxadii qarniga'
Kummanaan Falastiiniyiin ah ayaa isugu soo uruuray xayndaabka uu dhexeeyo Israa'iil iyo marinka Qaza si ay dibadbaxyo uga dhigaan halkaasi oo ay uga soo horjeedaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee Qudus.
Image caption Dadweynaha Israa'iil oo soo dhawaynayo go'aanka Mareykanka uu safaarad uga furanayo Qudus.
Illa dabayaaqadii bishii Marso, in ka badan 40 Falastiiniyiin ah waxaa dilay ciidammada Israa'iil kaddib markii dibadbaxyo ay ka socdeen deegannada xadka ku yaalla.
Madaxa xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay Zeid Racad Al-Xusen ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay awood dheerad ah u adeegsanayso shacabka.
Israa'iil waxay sheegtay inay xaq u leedahay in shacabkeeda ay ka difaacdo maleeshiyaad ay ku sheegtay inay xadka kasoo gudbayaan.
Image caption Shacabka Falastiiniyiintu waxay billaabeen dibadbaxyo ka dhan safaaradda uu Mareykanku maanta ka furanaya magaalada Qudus.
Dowladda Mareykanka oo shaacisay waqtiga ay furayso safaaradda cusub ee Qudus
Ismari-waaga uu dhaliyay go'aankan
Arrinta ku salaysan magaalada Qudus waxay noqotay sababta ugu wayn ee dhalisay daagaalka Falastiin iyo Israa'iil.
Haysashada Israa'iil ma aqoonsano caalamka sida ku xusan heshiiskii Falastiiniyiinta iyo Israa'iil sanadkii 1993-dii, waxaa arrinta magaalada Qudus la sheegay in looga wadahadlo kullamo kale.
Illa sanadkii 1967-dii, Israa'iil waxay guryo 200,000 uga dhistay dadka Yahuudda ah bariga magaalada Qudus. Arrintani waxaa lagu tilmaamay mid sharci darro ah inkasto Israa'iil ay dhagaha ka furaysatay.